Channel3- Download Facebook Videos - GenFK.com
better or different
FB URL: https://www.facebook.com/channel3official/
"ဤကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်တစ်လွှားမယ် သူငါများတို့ရယ် အလှသစ္စာကိုကွယ်ဖြေရှာမောကြတယ်" ❤❤ ကြွေလွင့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းဦး ရဲ့ သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ် ^အလှကမ္ဘာမြေ^ ဆိုတဲ့တစ်ပုဒ်ကို တင်ဆက်ချင်ပါတယ်။
"ရွှေပင်လယ်ကြီး ကားဆီးထားလို့... " ဆိုတဲ့သီချင်းကိုမှတ်မိသေးရဲ့လား.. ဒီသီချင်းကဘယ်ချိန်နားထောင်ထောင် နားထောင်လို့ကောင်းဆဲပါပဲနော်။ ရွှေပင်လယ် ဆို. ရတနာဦး ရေး. မင်းချစ်သူ
တရုတ်ပြည်ကမက်စောက်တဲ့တောင်တက်တံတားနဲ့ တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့တရုတ်တိုင်းရင်းသားတွေ။ ဆင်းရဲမှုတိုက်ဖျက်တာ လူဦးရေ ၃ သန်းရှိပြီတဲ့ တရုတ်ပြည်မှာပါ။ Crd.. BBC Burmese
"ပန်းရောင်ချယ်'' ပြန်လည်သီဆိုထားတဲ့ ''အချစ်စွမ်းအား'' သီချင်းလေးပါ တောတော်မိုက်တယ်။ နားထောင်ကြည့်။ Pepsi Cola Myanmar ရဲ့ Youtube Channelမှာလည်း FHD အကြည်တင်ထားပါတယ် အောက်ကလင့်ခ်ကလေးကနေသွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ http://bit.ly/SwanArrByPanYaungChel
(၂၁.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့ကတရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ကွမ်းရှီပြည်နယ်မှာ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာလူငယ်လေးတစ်ဦးကအဖွားအိုကြီးတစ်ဦးကိုကူညီခဲ့တာလေးပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဗွီဒီယိုမှာဆက်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
ဝိုင်းလေးရဲ့ သီတင်းကျွတ်ညလေးတစ်ည "ပျော်ရွှင်သာယာလှပသောသီတင်းကျွတ်ဖြစ်ပါစေ"
ဘဝဆိုတာရုန်းကန်မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေရတာပါ ကိုယ်ဟာနိမ့်ကျနေရင်လည်းအနှိမ်ခံရသလို တောက်ပဖို့အားယူနေချိန်မှာလည်းအများရဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေဝေဖန်ခြင်းတွေခံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တောက်ပမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်မခံဘဲ ဘယ်သူဘာပဲပြောပြော သင့်ရဲ့ အလင်းရောင်ကို "တောက်ပလိုက်ပါ" ဘဝအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေသော Video လေးမို့ပြန်ရှဲရ်လိုက်ပါတယ်။ မူရင်းတင်သူကိုလည်း Credit ပေးပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘယ်ချိန်နားထောင်ထောင်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့သီချင်းလေး။ မိဘမေတ္တာဖော်ကျူးထားတဲ့သီချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ "ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမီ" ရေး ရှုမဝမောင်တင့်ဆွေ ဆို ဇော်ဝမ်း
ရီရအောင်😁😁 Happy Tuesday..🖤🖤
Tik Tok မှာဒီလိုဆော့ရအောင် 😝 Crd.. Original Uploader
မင်းလေးနားလည် ရေး- စစ်ဟိန်း ဆို- ထူးအယ်လင်း ... အခုထိနားထောက်လို့မရိုးသေးတဲ့သီချင်းလေးမို့ ပြန်share လိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်တနင်္ဂနွေနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။
ကဲ မရီရရင် ဘေလ်ပြန်လျော်ပေးမယ်နော် 😝 ကြိုက်ရင် LIKE AND SHARE လုပ်သွားပေးပါဦး။
* မီးဝေလာဆက် ဆောင်ဆန်နာထီမိုင် *ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ ၊၅ နှစ် လောက်ကခေတ်စားခဲ့တဲ့ထိုင်းသီချင်းပါ ဒီသီချင်းကိုမြန်မာတိုင်းလိုလိုသိကြပါတယ်။ ဒါကို Channel3 ကဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ အမှားအယွင်းလေရှိသွားရင်တောင်ပန်းပါတယ်ဗျ။
ဂျပုများ KISS ပေးချင်သောအခါ.. 😝😝 Crd org.uploader
Don't Cry Anymore Khin Su Su Naing မငိုနဲ့တော့ ခင်စုစုနိုင် Crd.. Videos
TikTok မှာခေတ်စားနေတဲ့ ဆဝပ်ဒီ ခ.. ခ.. ခ.. လေးပါ မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ Channel3 မှဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။ အမှားရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ပထမဦးဆုံးဘာသာပြန်မို့ပါ။ ကြိုက်ရင် Like and Share လုပ်သွားပေးပါဦးနော်။
အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်စီးသေးတဲ့ ဘွားဘွား The Voice Of Senior ကပါ ကြိုက်ရင် LIKE AND SHARE လုပ်သွားဦးနော်။
ရှိပြီလား 😛 သင့်မှာဒီလိုချစ်သူ